सर नमस्ते , सर मेरोजिज्ञास। मेरो बच्चा २५ दिनको भयो , बेलुका आगोको कोइलामा सेक्नी गरेको छौँ ।सेक्नी क्रममा अतिनै रुन्छ । र राती घ्यार- घ्यार घाँटीमा केहि र्याल्लो अड्केको जस्तो गर्छ , दुध खुवाउने क्रममा पनी केहि समय रुन्छ । यो के भा को होला सर? बच्चा सेक्नु राम्रो कि नराम्रो होला सर? आमाको दुध नआयर lactogin खुवाउने गरेका छौ, बच्चाले पेट दुखेको जस्तो व्यवहार गर्छ र पातलो दिसा गर्छ।
Asked by Krishnaraj Dhakal
153 views 1 Answers0Likes Paediatrics
धेरै पोल्ने गरि र धेरै नै तातो बनाएर नसेक्नुहोला। दूध खुवाउदा खुवाइसकेर एकछिन ठाडो नै राखी ढ्याउ गर्न लगाएर मात्र सुताउनुहोला। ल्याक्ट्कोजिनले गर्दा पातलो दिशा आएको हुनसक्छ । कैलेकही ल्याक्टोजेन नपच्ने नि हुन्छ कति बच्चालाई । त्यसो भएमा दिशा जाँच गरेर सोहिअनुसारको खुवाउनुपर्छ।
3 views0Answers0Likes Psychiatry
Child has one part of cheek swollen and headache
मेरो छोरा 22 महिनाको भयो । हर्नियाको समस्या देखिएको छ । अपरेसनको...
Patient is suffering from EHPVO How much cost for paediatrics...
hello dr. mero babu 11 month ko vayo breastfeeding gareko child...
hlw dr. मेरो बाबू १० महिनाको भयो हिजो बाट खुट्टामा chicken pox...